သူတို့တွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ရင်ခုန်သံ by popolay.com
သူတို့တွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ရင်ခုန်သံ
11 Apr 2018 1,758 Views
မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီး ကျရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကြန်ဆိုတာ လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး အားလုံးပျော်ရွှင်ကျတဲ့ပွဲကြီးဆိုလဲမမှားပါဘူး။ သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုရင် လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ ဘာလုပ်မယ်၊ ဘယ်သွားကြမယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကြန်စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြတဲ့ အချိန်လေးလဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေနည်းတူ အနုပညာရှင်များမှာလည်း သင်္ကြန်ရောက်ရင် ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေရှိပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ သင်္ကြန်အစီအစဉ်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
လူငယ်တွေရဲ့အသည်းစွဲ အဆိုတော်ရွှေထူးကတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်ကိုမန္တလေးက MBA & Las Vegas မဏ္ဍပ်မှာ ပရိတ်သတ်ကြီးတွေနဲ့ တူတူရှိနေပါမယ်တဲ့……..
အိမ့်ချစ်က သင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး နှစ်နေရာလုံးမှာရှိပါမယ်တဲ့။ အကြိုနေ့နဲ့ အကျနေ့ကို ရန်ကုန်က Coca-Cola Summer Oasis, Lifebuoy Forever, ရွှေသံလွင် My Tel နဲ့ Mottama ဆိုတဲ့ မဏ္ဍပ်တွေမှာ အလှည့်ကျရှိနေပါမယ်။ အကျတ်နေ့နဲ့ အတတ်နေ့မှာတော့ မန္တလေး ၅မိုင်အပန်းဖြေစခန်းက Myanmar Beer Thingyan Festival မဏ္ဍပ်မှာရှိပါမယ်တဲ့…….
၀ါဆိုမိုးဦးကတာ့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာလဲ နှစ်တိုင်းရှိနေကြ ၁၉လမ်းက MyTel မဏ္ဍပ်မှာပဲရှိပါမယ်တဲ့။ “နှစ်တိုင်း ၁၉လမ်းsky net မဏ္ဍပ်မှာသီဆိုဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ ၄နှစ်ရှိသွားပြီ ဒီနှစ်နဲ့ပါဆို၅နှစ်တောင်ရှိသွားပြီ sky net ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်လိုတောင်ဖြစ်သွားပါပြီ နှစ်တိုင်းသီဆိုဖျော်ဖြေဖို့ ကမ်းလှမ်းတဲ့ ချစ်မ မမီး နဲ့ sky net ကအကိုအမတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဒီနှစ်”ရွှေသံလွင်Mytel “၁၉လမ်းမဏ္ဍပ်ကအမာခံ ပရိတ်သတ်များနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး သင်္ကြန်ကိုဖြတ်သန်းမယ်နော်…..” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကို လာရောက်ပျော်ပါးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
အဆိုတော်ဝိုင်းလေးက အတာသင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိပါမယ်တဲ့နော်။ ရန်ကုန်က Lifebuoy Forever Thingyan မဏ္ဍပ်မှာ လေးရက်လုံးရှိနေပါမယ်တဲ့…….
ရဲရင့်အောင်က ပျော်စရာကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ပွဲကို ဘားအံမှာရှိနေပါမယ်တဲ့လေ……
အဆိုတော်ပိုပိုတစ်ယောက်ကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ကို ရန်ကုန်မှာပဲရှိပါမယ်တဲ့။ အင်းစိန်မဏ္ဍပ်မှာ လေးရက်လုံးရှိသလို MNTV My Tel မဏ္ဍပ်မှာလဲရှိမယ်တဲ့နော်…..
ကဲ….. ပရိသတ်ကြီးကရော ဘယ်အဆိုတော်တွေရှိတဲ့ ဘယ်မဏ္ဍပ်မှာရှိနေကြမှာလဲ……